Dhaqan Iyo Ilbaxnimo Ma Isqabikaraan? - djibnet.com
djibnet.com: Dhaqan Iyo Ilbaxnimo Ma Isqabikaraan? - djibnet.com
Dhaqan Iyo Ilbaxnimo Ma Isqabikaraan? Noter :
Somalidu waxay leedahay dhaqan ay kaga duwantahay afrikada lawadagta dubka madow. Tan iyo markii uu naa soogalay gumastuhu uu kala qoqobay umada somaliyeed waxaa yimid dhaqangur oo dhiskii dhaqulhaa dumay.
Markaas suaashu waxay tahay dhaqankeeni dumay maku dabaqi karnaa ilbaxnimada aan sheeganayno???
Horayna waxu yidhi cadoo xamarqood sidan:
Qarnii waliba dhaqankiisa
waa inu ku dhaataa
sumadaada lma dheeho
dhaxalkii adowgaana mi ladhafiikaro mahaa
..... Dhidibkii laguu aasay dheeda yaa uu gogsaday dhagartiisa yaa qabaaaaaaaaa................
Iyo dhan halkan ka dhagayso
Posté 02 avril 2009 - 09:25
Yab, le Wednesday 1 April 2009, 20:48, dit :
Yaabe Aado khayr hel oo xooga Allah aku adkeeyo Amiin dheh
Heskaan dhiritaan gaara iyo ficil bu ku abuura dadka Allow
Fuad ilkacase et Abdi nuur en costume traditionel
Humm I liked it..Marxuunku il s adressait aux jeunes generations
Dhaqankeena ha u biqin inaadeer tant qu on aura des "Dona" et des "Simane", des "la raison" des Yab..
et ts les autres qui pourront se reconnaitre en ces personnes...les amoureux de leurs origines.
Xeer et moi pourront dormir des 2 oreilles...la releve est assuree n est ce pas Xeer
Posté 03 avril 2009 - 07:36
mimi2005, le Thursday 2 April 2009, 11:17, dit :
Amiin Mimi et marci , waa inaan balahda ka ilaalino dhaqanka kuwa kalana aan kusoo giiidno eebana hanalagarab kalo...
Posté 03 avril 2009 - 07:43
hey yab arrete de copier
Posté 03 avril 2009 - 08:04
le-patrouilleur, le Friday 3 April 2009, 21:35, dit :
Patrouilleur, mawax faiidoleh oo qabato baad wayday? Sawdiga igu kenkenay waa sidee? Ni caqlileh baan kumoodayeh waa sidee maad bahayinowday?
Posté 03 avril 2009 - 08:11
Yab, le Friday 3 April 2009, 19:56, dit :
desole bro mais j'ai pas saisi le dernier mot
Posté 03 avril 2009 - 08:23
le-patrouilleur, le Friday 3 April 2009, 22:03, dit :
Afka soo baro kadibna ii kaalay.
Patroulleur yow hadii aad ereyo taqaan kolah ii kalay hadii kaleh tirow labogantaleh ha ila karajogin...
Posté 04 avril 2009 - 05:45
Yab, le Friday 3 April 2009, 20:15, dit :
Comme la dit Abdi Haybe c du "waraabeyne" moi aussi je peux le faire
talabad maha kasodona maa gabadh baa tahay marka aa kuu imanayo?
Posté 04 avril 2009 - 08:36
le-patrouilleur, le Saturday 4 April 2009, 19:37, dit :
Nin way noqoo oo sida raga u hadal aado...
Yab, le Saturday 4 April 2009, 20:28, dit :
c caqli carruur pas cali carur looks like u need some lessons
Posté 04 avril 2009 - 08:58
waar yaadaa Yab iyo le-patrouilleur aado ismaa fahmaysaan ee dhulka ilaahay u kala xayraamaa
caydunaa waa ceeb in ay rag tol ah isku ilka beelaan
Waa Xeer oo aad iyo aad u xanaaqay sidii jiir xaraagoodaay
Posté 04 avril 2009 - 09:21
XEER, le Saturday 4 April 2009, 22:50, dit :
Xeerow waan qaatay arinkaaga saxiiib.......
Waa yahay aado YAB laakiin saxiib halkan ma waxaad u jeedaay:
WIILYAHOOW HADAAD GEESI TAHAY OO AAD WAX GARANAYSID GOFONAHA ILKAHA KAAGA YAAL
GARO HALKU DAQO HADDII KALE DAROOW LABA GANTALE HA ILA GARAB JOOGIN cajiib ala maxaad
reer GALBEEDI tahay(reer KAHABOCI?
Posté 04 avril 2009 - 10:06
XEER, le Saturday 4 April 2009, 23:22, dit :
Raga sidaado kaleh wax fahmayaa baa la raba lama rebo mid afar hal oo frangi ah la yimaada mesha. ujeedadaydu waxay ahayd afka hoyo soo baro kadibna ila goloftan...
Waxuu garan waayay "bahaayin" ee u sheeg ninkaaaas saxibkay ah. Franji horay baan uga tagay intaan bartay ba afkayga hooyo....
Posté 05 avril 2009 - 12:17
XEER, le Saturday 4 April 2009, 21:22, dit :
Anaa awoowgay Cheikh Cisseh Wali iya raguu ku curtay.
XEER KAHAA BOCLEEY miyaad ka timi
oo run ah
Ps: yab bro gofanaa ilkaha kaaga yaal iyo darawda laba gantal leeg miyaad garan
walaa xawla...Xeer adoo baal goray woofisha gasho,af soomaali wayna ruxuu...